नेपालमा कहिलेदेखि लकडाउन हुदैछ ?सरकारको तयारी के छ ? - योहोखबर
०८ आश्विन २०७८,शुक्रबार
नेपालमा कहिलेदेखि लकडाउन हुदैछ ?सरकारको तयारी के छ ?
काठमाडौँ – विश्वलाई आतंकित तुल्याएको कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई पनि छोएको छ । केहि दिन अघिदेखि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, विज्ञ भने लकडाउनले मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने बताउछन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोराना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत २० गतेदेखि आइतवारसम्ममा २ हजार...संक्रमित थपिएका छन् । दैनिक संक्रमित थपिने क्रम पनि चैत २३ गतेदेखि २ सय र २६ गतेदेखि ३ सय माथि पुगेको छ । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपालमा लकडाउनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हालै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
सीसीएमसीको बैठकले पनि पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरियन्ट समेत देखा परेको भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। उसले बढी भिडभाड हुने विद्यालयलगायत क्षेत्र बन्द गर्न पनि सिफारिस गरिसकेको छ ।
विज्ञ भने सर्वसाधारणलाई लकडाउनको त्रास देखाउनु भन्दा रोकथामका उपाय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । अघिल्लो पटकको लकडाउनले समाधान नदिएकाले त्यसबाट पाठ सिकेर अन्य उपाय चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतमा अहिले दैनिक डेढ लाख भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । छिमेकीसँगको खुला सिमानाका कारण यहाँ पनि त्रास बढेको हो । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्ने तथा स्वास्थ्यजाँच प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ । लकडाउन गरेर फेरि जनजीविका नै ठप्प पार्ने बाटो रोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।